Idizayini Yokuhlanza, Insizakalo Yokuhlanza, Imikhiqizo Yokuhlanza I-Airwoods
Iyunithi yokuphatha umoya omusha
Sigxila ku-Innovative HVAC & Cleanroom Solutions
I-AIRWOODS ingumhlinzeki ohola phambili womhlaba wonke wemikhiqizo yokushisa eyonga ugesi, yokungenisa umoya neyomoya (HVAC) kanye nezixazululo zeHVAC ezimakethe zezentengiso nezimboni. Ukuzibophezela kwethu ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngezinsizakalo nemikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu ngamanani akhokhelekayo.
Iphrojekthi Yonyaka Ephelele
Nikeza izixazululo ezenzelwe ukuklama, ukuthengwa kwempahla, ukuthuthwa, ukufakwa, ukuqeqeshwa kanye nezinsizakalo zokuthumela
Nikeza ngoqeqesho lobungoti ukusiza amakhasimende ukuphatha kangcono uhlelo lwawo, ukunciphisa amaphutha nokwelula isikhathi senkonzo yomshini.
Ukuzibophezela kwethu ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngezinsizakalo nemikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu ngamanani akhokhelekayo.
Kusukela kuzilawuli zokufinyelela ekuvinjelweni kwabangenayo, kusuka ekuqaphelweni kwevidiyo kuye ekuphepheni kwe-cyber.
Ezolimo Zanamuhla Zasendlini
Ngobuchwepheshe besayensi yokufaka umoya opholile, ezolimo ezisebenza kahle zanamuhla ezisebenza ngomsindo wesitiriyo zasendlini ziya ngokuya zithandwa ngenxa yokukhiqiza kwayo okuphezulu futhi okuzinzile unyaka wonke, kanye nenzuzo yezomnotho enenzuzo.
Igumbi lokuhlanza noma igumbi elihlanzekile liyisikhungo esivame ukusetshenziswa njengengxenye yokukhiqiza okukhethekile kwezimboni noma ucwaningo lwesayensi, kufaka phakathi ukwenziwa kwezinto ezithaka imithi kanye nama-microprocessor.
Ngenqubo yokuphrinta yenqubo yokuhlanganiswa kwama-organic voltatile (VOCs) kuvela kukayinki ...
Uhlelo lwe-HVAC lungenye yezindawo ezibaluleke kakhulu zokufakwa endaweni yokudlela / ehhotela ...
Izinhlanganisela zezinto eziphilayo ezinokuguquguquka
Ukwelashwa kwe-Airwoods VOC, isixazululo sokulawula nokubuyisa, ukungcola komoya okuyingozi okuphansi ...
Uma kukhulunywa ngemfundo, isikhathi esiningi sibhekisa esikoleni lapho bobabili abafundi ...
Hlola isikhungo sevidiyo sokubonisa iphrojekthi nezinsizakusebenza zemfundo.
Amayunithi Wokuphatha Umoya Ohlanganisiwe
Abahlanzayo bomoya abasebenza nge-Disinfection Function
Imodyuli epholile yomoya opholile we-Chiller
I-CVE Series Permanent Magnet Synchronous Inverte ...
Amaphaneli we-Glass Glass Wool Sandwich
Kumisiwe Iyunithi Yokuphathwa Komoya
Uhlobo Kuqondile Heat Pump Energy Heat Lokubuyisela Ve ...
Amayunithi Ukuphathwa Kwamanzi Apholile
VOCs UKWELASHWA UHLELO
UDisemba 22, 2020
Ngomhlaka 17, 2020
Yini iFan Filter Unit? Iyunithi lokuhluza abalandeli noma i-FFU ibalulekile i-laminar flow diffuser enefeni ehlanganisiwe nemoto. I-fan nemoto zikhona ukunqoba ingcindezi emile yesihlungi se-HEPA noma se-ULPA esifakwe ngaphakathi. Lokhu kuyasiza ...
UNovemba 15, 2020
Ngabe imboni yezokudla izuza kanjani ngezindlu ezihlanzekile?
Impilo nenhlalakahle yezigidi zixhomeke kubakhiqizi 'nakumaphakethe' wokugcina indawo ephephile futhi engenabungozi ngesikhathi sokukhiqiza. Kungakho ochwepheshe kulo mkhakha babanjwa kumazinga aqinile kakhulu kune ...
Ukupakisha nokulayisha kahle isitsha kuyisihluthulelo sokwenza ukuthunyelwa kube sesimweni esihle lapho amakhasimende ethu ethola ngakolunye uhlangothi. Ngala maphrojekthi wezindlu zokuhlanza zaseBangladesh, umphathi wethu wephrojekthi uJonny Shi wasala esizeni ukuze aqondise futhi asize yonke inqubo yokulayisha. Yena ...